Syria · Janoary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Syria · Janoary, 2012
Tantara mikasika ny Syria tamin'ny Janoary, 2012
Nanao Jery Todika Ny Taona 2011 ny Global Voices “Néerlandais”
Benin16 Janoary 2012
Raha toa ny taona 2012 ka efa mandeha tsara amin'ny làlany, ireo mpandika teny ao amin'ny Global Voices "néerlandais" dia nanao jery todika ny taona 2011. Inona ny lahatsoratra niavaka indrindra ary inona no mampiavaka ny Global Voices ?
Syria: Tolona ho amin'ny Fahafahana Sy Famaranana Ny Fahanginana
Ady & Fifandirana14 Janoary 2012
Hatramin'ny volana Martsa 2011, tonga hatrany Syria ny fitroarana niainga tao Tonizia sy Ejypta, an'arivony ireo namoy ny ainy tamin'izany ary an'aliny kosa ireo nosamborina sy tsy hita popoka. Miatrika famoretana tsy mbola nisy hatrizay sy ady atao amin'ny haino aman-jery hanalana endrika fanoherana amin'ny endriny rehetra ny mpikatroka Syriana....
Syria: Mpiondana Aterineto Tezitra Noho Ny Kabarin'i Assad
Ady & Fifandirana11 Janoary 2012
Nanao kabary lavabe nivaralila ny Filoha Siriana Bashar Al Assad omaly (10/01/2012), izay nahatezitra mafy an'ireo Siriana mihetsika manohitra ny fitondrana jadony. Rehefa miteny ireo mpitondra Arabo, dia mandray ny fitendry ireo Arabo mpiondana aterineto ka mandray anjara anaty resaka mikasika ireo filoham-panjakana izay voan'ny nataony ihany ka tonga amin'izao...
Ny Lahatsoratra Global Voices Be Mpamaky Indrindra Tamin'ny Taona 2011
Afrika Mainty09 Janoary 2012
Ireo lahatsoratra 20 voalohany be mpamaky indrindra tato amin'ny Global Voices nandritra ny taona 2011 dia ahitana ny momba an'i Japana, telo avy ao Ejipta, ary roa avy ao Filipina. Ary tantara tokana kosa ny momba ilay mamba goavana be [mg]!
Syria: Damaskaosy “Fanaovana Vy Very Ny Aina” Sy Fanamboamboarana Ataon'ny Fahitalavi-Panjakàna
Ady & Fifandirana07 Janoary 2012
Raha hetsi-bahoaka goavana no mitranga manerana ny faritra maro eo amin'ny firenena mitaky ny hifaranan'ny fitondran'i filoha Siriana Bashar Al Assad, ny fahitalavi-panjakana Siriana kosa nitatitra fanapoahana baomba nataonà mpanao vy very ny ainy tany amin'ny manodidina an'i Midan any Damaskaosy tamin'ny Zoma 6 Janoary. Ireo lahatsary sasany mivezivezy any...
Tontolo Arabo: Taona Iray An-ttsary – Ny Fantin'ireo Mpanoratray
Bahrain04 Janoary 2012
Satria nataontsika veloma mandrakizay ny taona 2011 ary mibanjina indray ny taona 2012, dia nangataka ireo mpanoratray izahay mba hizara aminareo ireo sary izay manamarika iny taona lasa iny eo imason-dru zareo tany amin'ny fireneny isanisany avy. Ity fantina manaraka ity no maneho ny safidin'izy ireo.
Syria: Famonoana Feno Habibiana Iray Tamin'ny Krismasy
Ady & Fifandirana01 Janoary 2012
Mihoatra ny 250 ireo Syriana nisy namono nandritra ireo roa andro lasa, izay niafara tamin'ireo onjam-pahatairana erak'izao tontolo izao. Avy any amin'ny Filan-kevitra Nasionalin'ny Syriana mpanohitra (SNC) ny tatitra momba ireo "famonoana mampihorohoro" ireo, izay nanitrikitrika ny hanamelohan'ny Vondrona Arabo ireo famonoana ireo sy ny handraisan'ny Firenena Mikambana fepetra mba...